प्रधानन्यायाधीशज्यू ! यस्तो निर्णय गर्दा तपाईंलाई लाज भएन ?
(न्याय परिषद्ले सर्वोच्च अदालतस“गै उच्च अदालतमा हालै गरेको १८ न्यायाधीश नियुक्ति सिफारिस विवादित बनेको छ । संविधान र न्याय परिषद् ऐनविपरीतको सिफारिसले न्यायालयको गरिमा धुलिसात पार्ने भन्दै आक्रोस अनि चिन्ता व्यक्त भइरहेका छन् । न्यायालयलाई नजिकबाट नियालेका र महान्याधिवक्ताको भूमिकासमेत निर्वाह गरिसकेका वरिष्ठ अधिवक्ता रमण श्रेष्ठसंग हामीले पछिल्लो न्यायाधीश सिफारिस, यसले भावी दिनमा पार्ने असर र न्यायालयभित्रका अन्य बेथितीबारे कुराकानी गरेका छौं । प्रस्तुत छ, कुराकानीको सम्पादित अंशः सम्पादक)
० न्याय परिषद्बाट विगतमा पनि सर्वोच्चलगायत अदालतमा न्यायाधीश नियुक्ति सिफारिस हुँदै आएको थियो । तर, यसपटक उसले गरेको न्यायाधीश नियुक्ति सिफारिस निकै विवादित बनेको छ । भनिदैछ कि स्वस्छ र स्वतन्त्र न्यायपालिकामाथि यो सिफारिसले प्रहार गरेको छ । यस्तै हो ?
–हरेक निर्णय लिन राज्यले संविधान र कानून बनाएको छ । न्यायाधीश नियुक्ति सिफारिस कस्ता व्यक्तिलाई गर्नुपर्छ भनेर नयाँ संविधानमा पनि व्यवस्था छ । २०४७ मा संविधान बनेपछि न्याय परिषद् ऐन, २०४७ आयो र त्यसैअनुरुप न्यायाधीश नियुक्ति सिफारिस गर्ने भनियो । नयाँ संविधान निर्माणपछि त्यसको ठाउँमा छुट्टै न्याय परिषद् ऐन आएको छ । त्यसमा कस्ता–कस्ता व्यक्तिलाई न्यायाधीश बनाउने भन्ने प्रष्ट व्यवस्था छ । तर, यसपटक त्यसमा उल्लेख प्रावधानहरू बेवास्ता गर्दै न्यायाधीश नियुक्ति सिफारिस न्याय परिषद्ले गरेको छ । यो गलत छ ।
० न्यायाधीश नियुक्ति सिफारिसमा पहिले पनि यही तौर–तरिका अपनाइएको थियो । जतिबेला महान्यायाधिवक्तालगायत सरकारलाई कानूनी सुझाव दिने स्थानमा तपाईंलगायत व्यक्तिहरू नै हुनुहुन्थ्यो । भनेपछि संविधान र कानून मिच्न त तपाईंहरूले नै प्रेरित गर्नु भएको रहेछ होइन ?
–संविधान र कानूनअनुरुप गर्नुपर्छ । त्यसविपरीत गर्नुहुन्न । व्यक्ति कुनै विचार र सिद्धान्तबाट प्रभावित हुनसक्छ तर उसले सम्हाल्ने पदमा पुगेपछि त्यसले मागेको भूमिका निर्वाह गर्न सक्नुपर्छ भन्ने मान्यता म राख्छु । म त्यही अनुरुप निर्देशित भए“ ।
जहा“सम्म विगतमा न्याय परिषद्ले गरेको न्यायाधीश नियुक्ति सिफारिसको स्वच्छताको कुरा छ, विगतमा पनि न्याय परिषद् ऐन मिचिएको थियो । तर, यसपटक त्यसको हुर्मत नै लिइएको छ ।
० त्यो ऐनमा चाहि“ के के व्यवस्था छन् ?
–न्यायाधीश सिफारिस गर्नुअघि सम्बन्धित निकायबाट योग्यता पुगेका विवरण माग्ने व्यवस्था ऐनमा छ । अदालत, वकिलबाट माग्दा नेपाल बार वा बार काउन्सिल हुनसक्छ । सरकारी वकिलहरूको कार्यालय महान्यायाधिवक्ताको कार्यालयबाट पनि योग्यता पुगेका व्यक्तिहरूको सूची माग गर्न सकिन्छ । न्याय सेवा आयोगका कर्मचारी पनि छन् । यी सबै स्थानबाट योग्यता पुगेका व्यक्तिको विवरण मागेर रोस्टर बनाउने परिकल्पना न्याय परिषद् ऐनले गरेको छ । ऐनले रोस्टर बनिसकेपछि ती व्यक्तिहरूबारे छलफल गरेर निर्णय लिऊ भन्छ । उसको योग्यता, क्षमता, अनुभव, न्यायसम्पादन गर्दा दिएको योगदान केलाऊ भन्छ ।
प्राइभेट वकिल उच्च अदालतमा न्यायाधीश नियुक्ति गर्दा अधिवक्ता र वरिष्ठ अधिवक्ता भएको १० वर्ष भएको हुनुपर्ने व्यवस्था गरिएको छ । उसले गरेका बहसको मूल्यांकन पनि गर्नुपर्छ । तर, यसपटक मापदण्ड भयंकर मिचिएको छ । ल फर्म नै नखोलेको, वकालत नै नगरेको मान्छेलाई जग हँसाइ गरेर न्यायाधीश नियुक्ति गरिएको छ ।
० कसरी जग ह“साइ भयो स्पष्ट पारिदिनुस् न ?
–उच्च अदालतको न्यायाधीशका लागि समेत अयोग्य भएकाहरूलाई सर्वोच्चमा ल्याइएको छ । सर्वोच्चजस्तो नजिर प्रतिपादन गर्ने अदालत, जहाँ अनुभवले खारिएकाको आवश्यकता छ । तर, यहाँ त खल्तीबाट झिकेर गरिएको छ । मैले वकालत थालेको ३० वर्ष भयो । मलाई त न्याय परिषद्को पछिल्लो सिफारिस हेरेर लाज लागेको छ । योभन्दा निर्लज्जता अरू के हुनसक्छ ? म प्रश्न गर्न चाहन्छु– प्रधानन्यायाधीशज्यू, यस्तो निर्णय गर्दा तपाईंलाई लाज भएन ?
० प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्र शमशेर राणाका पछिल्ला फैसला र कदमको प्रशंसा भइरहेका बेला उहाँ अध्यक्ष रहेको न्याय परिषद्को सिफारिस विवादमा परेको छ । यस्तो निर्णय लिन उहाँ किन बाध्य हुनुभयो होला ?
–सर्वोच्च केटाकेटी खेलाउने ठाउ“ होइन । यो कुशल न्याय सम्पादन गर्ने थलो हो । यो कसैलाई अभ्यास गराएर न्यायाधीश बनाउने ठाउँ हुँदै होइन । योग्य व्यक्ति लैजानुपर्ने ठाउँ हो । यहाँको न्यायाधीश हुन कम्तीमा १५ वटा मुद्दामा उसले फैसला गरेको हुनुपर्छ । न्यायसम्पादनको कुशलता र नजिर स्थापना पनि उत्तिकै महत्त्वपूर्ण हुन्छ । तर, प्रधानन्यायाधीश यसमा निकै बहकिनु भयो । न्याय परिषद्का सदस्यले फलानो नभई हुँदैन भनेपछि त्यहाँ राम्रा मान्छे छान्ने भन्दा पनि नराम्रा मान्छेका लागि प्रतिष्पर्धा चलेको देखियो । यो लज्जा र बिडम्बनाको कुरा हो ।
० सरकारसंग तर्सिएको अझ भनौं प्रधानन्यायाधीश बनाउँदाको ‘गुन’ पछिल्लो न्यायाधीश सिफारिसमा प्रधानन्यायाधीशले तिरेको भन्ने कोणबाट पनि विश्लेषण भइरहेका छन् । यो विश्लेषण कतिको सत्य नजिक छ ?
–अहिले सिफारिस गरेका व्यक्तिले भोलि गर्ने राम्रा–नराम्रा दुवै कामको जस–अपजस प्रधानन्यायाधीशको थाप्लोमा पर्छ । त्यसैले उहाँले योग्य मान्छे मात्रै छान्नुपर्दथ्यो । यदि अनुचित राजनीतिक दबाबमा उहाँलाई पारिएको हो भने त्यो नगर्न पनि सक्नुहुथ्यो । गर्नैपर्छ भन्ने थिएन । तर, उहाँले कुनै रोस्टरै नबनी, छलफल नै नगरी अनि मापदण्ड नै नबनाइ जसरी न्यायाधीश नियुक्ति सिफारिस गर्नु भएको छ, यो खेदपूर्ण र बिडम्बनापूर्ण छ ।
० तर, उहाँले त सर्वोच्चमा हीरा टिपेर ल्याएँ भन्नु भएको छ नि ?
–ल फर्म नै नखोलेको, वकालत नै नगरेको र न्याय परिषद् स्वयंले कारबाही सिफारिस गरेको व्यक्ति उहा“को नजरमा हीरा हो भने मलाई केही भन्नु छैन ।
० विधि, प्रक्रिया र मापदण्ड मिचेर न्यायाधीश सिफारिस गरियो भन्नुभयो । यसको मक्सद के हुनसक्छ, बताइदिनुहोस् न ?
–कसले कुशल न्याय सम्पादन गर्न सक्छ भनेर सोच्ने, चिन्तन मनन गर्ने दायित्व न्याय परिषद्को हो । तर, यसपटक कसलाई न्यायाधीश बनाउँदा प्रधानन्यायाधीश हुन्छ भनेर कम उमेरका व्यक्ति छान्ने काम भयो । न्याय सम्पादनलाई प्रभावकारी बनाउनेतर्फ नसोचेर कसलाई प्रधानन्यायाधीश बनाउने भन्नेमा अल्झिनु निर्लज्जताको पराकाष्ठा हो ।
० भनेपछि भविष्यको नेतृत्व सुनश्चित गरेर अदालतलाई आफ्नो नियन्त्रणमा राख्ने योजनामा दलहरु लागे ?
–हो, सर्वोच्चको नेतृत्व कसरी सुनिश्चित गराउने भन्नेमा दलहरुको ज्यादातर ध्यान गएको देखियो । आफू अनुकूल राज्य सञ्चालन गर्ने मनसाय दलहरुमा पहिलेदेखि थियो । फरक यत्ति हो त्यो यसपटक प्रष्टरुपमा मुखरित भएको छ ।
० पछिल्लोपटक प्रधानन्यायाधीश सिफारिसमा संसदीय सुनुवाइ समितिले विवेकपूर्ण निर्णय गरेको थियो । जसका कारण दीपकराज जोशी प्रधानन्यायाधीशको लाइनमा रहे पनि सुनुवाइ समितिकै कारण पाखा लागेका थिए । त्यसले सकार्ने सम्भावना पनि बाँकी नै छ नि होइन ?
–पहिलो ढोकाबाटै गलत चीज पसिसकेको छ । त्यसैले सुनुवाइ समितिबाट सच्चिने आश छैन ।
० न्यायालयमा हुल बाँधेर आफू अनुकूलका व्यक्ति न्यायाधीश बनाइंदैछ । भावी दिनमा यसले न्यायालयमा कस्तो प्रभाव पार्ने देख्नुहुन्छ ?
–हेर्नुस् अब यसको सोझो असर न्याय सम्पादनमा पर्छ । जनताको न्याय यसले बिगार्छ । न्यायालय नबुझेका अनि योग्यता र क्षमता नभएका व्यक्ति पसेपछि त्यसले गर्ने सम्पादन स्वभावैले प्रभावित हुन्छ ।
० तपाईंले लामो समयदेखि न्यायालयलाई नजिकबाट नियालिरहनु भएको छ । पहिले र अहिलेको न्यायालयलाई कसरी तुलना गर्नुहुन्छ ?
–प्रजातन्त्र पुनस्र्थापनाअघि पञ्चायतकाल थियो । बरु त्यो बेला न्यायालयको गरिमा अहिलेभन्दा उच्च थियो । तर, अहिले न्यायालयको गरिमा धुलिसात पार्ने काम भएको छ । पञ्चायतकालमा भन्दा पनि लथालिंग र भताभुंग अवस्थामा छ, हाम्रो न्यायालय ।
० कसरी त्यस्तो भयो ?
–२०४७ अघि राजाले न्यायाधीश नियुक्त गर्थे । राजाले गर्ने भए पनि योग्यता र क्षमतालाई प्रमुख आधार बनाइन्थ्यो । व्यावसायिकताच्यूत हुन हुँदैन भन्ने कुरालाई राजाले केन्द्रमा राख्थे । तर, अहिलेको कुरा अर्कै छ । न्यायालयलाई कसरी स्वतन्त्र र स्वच्छ पार्नेभन्दा पनि आफ्नो प्रभावमा पार्ने भन्ने प्रयत्न भइरहेछ ।
० यसमा दोषी दल मात्रै छन् कि अरु पनि ?
–राज्यका निकायमा बस्ने मानिसहरुको सोचाइ नै यसमा मुख्य जिम्मेवार छ । हामी समृद्धिका कुरा गरिरहेका छौं तर फेरि न्यायालयलाई अस्तव्यस्त पार्न तम्सिरहेका छौं । एकातिर हामी समृद्धिका कुरा गर्छौं अर्कातर्फ न्यायालयलाई धरासायी बनाइरहेका छौं । देश समृद्ध हुन त न्यायिक समृद्धि पनि त चाहिएला नि ? अयोग्य मान्छेलाई लगेर न्यायिक समृद्धि कसरी प्राप्त हुन्छ ? हेक्का राख्नु पर्दैन ?
० दलले न्यायालयको गरिमा बुझेनन् उसो भए ?
–राजाले न्यायालयको गरिमा र महत्त्व बुझेका थिए । तर हाम्रा राजनीतिक दल र तिनका नेतृत्वहरुले फिटिक्कै बुझेका छैनन् ।
० यी त समस्याका कुरा भए । अब यसलाई व्यवस्थित गर्ने, सच्याउने उपाय पनि त होलान् नि ?
–संविधानमा न्यायाधीशको नियुक्तिबारे व्यवस्था गरिएको छ । न्याय परिषद् ऐनमा त झन् यसलाई सुस्पष्ट गरिएको छ । त्यसलाई अंगीकार गर्ने हो भने अहिले आएका सबै समस्या हल भएर जानेछन् ।
० न्याय क्षेत्रभन्दा बाहिरबाट जसरी न्यायाधीश नियुक्ति गर्ने अभ्यास हामीले गरेका छौं । यो व्यवस्था पनि अलि अनुचित भयो कि ?
–बिल्कुलै होइन । हाम्रोमा मात्रै होइन, अन्तर्राष्ट्रियरुपमै यस्तो अभ्यास हुने गरेको छ । इंग्ल्यान्डकै कुरा गरौं । त्यहाँ एक तहबाट अर्को तहमा न्यायाधीशको बढुवा हुँदैन । माथिल्लो पदमा जाने सोच राखेका न्यायाधीशले त्यसबाट राजीनामा दिनुपर्छ ।
अमेरिकामै पनि राष्ट्रपतिले सर्वोच्चका न्यायाधीश सिफारिस गर्छन् । तर, त्यसको प्रक्रिया निकै पारदर्शी छ । सुरूमा रोस्टर बनाइन्छ र त्यसबारे लोकले थाहा पाउनेगरी छलफल गरिन्छ । त्यसैले न्यायाधीश ल्याउने नै प्राइभेटबाट हो ।
० यो त विकसित देशको कुरा भए । हाम्रोजस्तो सबै हिसाबले पिछडिएको देशमा त्यहाँको नक्कल गर्ने कुरा फलदायी नहोला कि ?
–सिद्धान्तका कुरा गर्न हामी सिद्धहस्त छौं । निकै ठूला–ठूला कुरा गर्छौं । बाहिरकै सिद्धान्त ल्याएर यहा“ सिञ्चित गर्दैछौं । अनि विकसित देशले न्यायालयमा गरेका राम्रा कुराचाहि“ हामीले अनुशरण गर्न पर्दैन ?
० न्याय परिषद्को संरचना पनि बढी राजनीतिक देखिन्छ । तपाईं स्वयंले पनि परिषद् दलको छाया“ बन्यो भन्नु भयो । यस्तो अव्यवसायिक न्याय परिषद्को संरचना किन नभत्काउने ?
–हिजो न्याय परिषद्मा ३ जना न्यायाधीश र २ जना बाहिरका हुन्थे । बाहिरबाट ल्याउ“दा प्रधानन्यायाधीशले सिफारिस गरेका र कानूनवेत्ता भन्ने थियो । अहिले १ जना न्यायाधीश हटाएर बारको प्रतिनिधि राख्ने व्यवस्था गरिएको छ ।
न्याय परिषद्को पछिल्लो कम्पोजिसनले समस्या आएको भन्नेहरू छन् । यो सत्य होइन । न्याय परिषद्को कम्पोजिसनले भन्दा पनि संविधान र कानूनविपरीत हि“डेकाले समस्या आएको हो । न्याय परिषद्मा रहेका सदस्य नै आफैं न्यायाधीश हुन कस्सिएपछि कसरी हुन्छ ?
० न्यायाधीश नियुक्ति एउटा पाटो भयो । यसबाहेक न्यायालयमा अन्य बेथितीहरु पनि जबरजस्त घर गरेर बसेका छन् नि होइन ?
–न्यायालय अस्तव्यस्त छ । यहा“ सुधार गर्नुपर्ने कुरा त कति हो कति ? बेहिसाब छन् । प्रवेशद्वारदेखि नै जनताले दुःख पाइरहेका छन् । ढिलो न्याय दिनु न्याय नदिनु हो भनिन्छ । तर, न्यायालयले यसमा ध्यान दिन सकेका छैनन् । वर्षौंदेखि न्याय नपाएर जनता तड्पिरहेका छन् । यसबाहेक अनियमितता र भ्रष्टाचार पनि उत्तिकै छन्, न्यायालयमा । काम गर्ने तौर, तरिका र पद्दतिमा पनि समस्या छ । परिणामतः न्याय सम्पादनमा त्यसको असर परेको छ । व्यक्तिपिच्छे प्रणाली बसाइंदा अहिले अनेक समस्या न्यायालयमा छन् । यहा“ प्रधानन्यायाधीश फेरि“दा सबै मापदण्ड बदलिन्छन् । कानून मन्त्री अर्को आउँदा पनि यस्तै हुन्छ । त्यसैले समग्र प्रणाली विकासमा ध्यान दिनुपर्छ । अन्यथा यहाँ भाँडाभैलो भइरहन्छ ।
० न्यायालयजस्तो अति संवेदनशील क्षेत्रमा यतिधेरै अव्यवस्था र भाँडाभैलो रहेको तपाईंले बताउनु भयो । यसको रमिते बन्न छाडेर सुधारको आवाज बुलन्द पार्ने दायित्व त तपाईंहरूजस्ता वरिष्ठ अधिवक्तालगायतका कानून व्यवसायीहरूको पनि होला नि ? किन यो मामलालाई गम्भीरतापूर्वक उठाइरहनु भएको छैन ?
–राज्यका सबै क्षेत्र बेथितीले ग्रस्त छन् । अरु क्षेत्र बेथिती र अव्यवस्थाले ग्रस्त भएपछि न्यायालय मात्रै शुद्ध हुने कुरा आउँ दैन । हामीले पटक–पटक यसबारे व्यक्तिगतरुपमा आवाज उठाएका छौं, नउठाएका होइनौं । अब पनि उठाउने नै छौं । खासमा यी विषय हामीले भन्दा पनि कानून व्यवसायीहरुको छाता संगठन नेपाल बार एसोसिएसनले उठाउनु पर्ने हो । तर यो बार नै कहाँ छ खोज्नु पर्ने अवस्था छ ।
उसले ठीक ढंगले जजमेन्ट नगर्दा न्यायालयमा अनेक बेथितीले मुन्टो उठाउने अवस्था आएको छ । बारको अघिल्लो नेतृत्वले राम्रो काम नगरेकाले हालै भएको निर्वाचनमा प्रगतिशील समूहलाई कानून व्यवसायीहरुले मत दिएका छन् । आशा गरौं, नयाँ नेतृत्वले व्यवसायिक ढंगले काम गर्नेछ ।
० तपाईंले बारको कुरा गर्नुभयो । जसको नयाँ नेतृत्वका लागि हालै निर्वाचन भएको छ । स्वतन्त्र हुनुपर्ने वकिलहरु यसरी दलको छाता ओढेर संगठित हुनु नै अनुचित भयो भन्नेहरु पनि छन् । यसबारे तपाईंको धारणा के छ ?
–संसदीय व्यवस्थामा दल हुन्छ । दलमा विश्वास गर्नेहरु हुन्छन् । यो अनुचित होइन । तर मूल कुरा के हो भने हामीमा व्यवसायिकता हुनुपर्छ । जस्तो प्रधानन्यायाधीश भइसकेपछि उसले त्यो पदले के माग गर्छ, त्यही अनुरुप भूमिका खेल्नुपर्छ । संविधान र कानूनलाई अक्षरशः पालना गरेर उसले कार्यसम्पादन गर्नुपर्छ ।
सूर्यनाथ उपाध्यायकै कुरा गरौं । उहाँलाई गिरिजाप्रसाद कोइरालाले अख्तियारको प्रमुख नियुक्त गर्नुभयो । तर, उहाँले नै गिरिजाप्रसाद कोइरालालाई पत्र काट्नुभयो । आफूलाई नियुक्त गरेको व्यक्तिको गलत काममा आँखा चिम्लिनुपर्छ भन्ने छ र ? नियुक्ति गर्ने कुरा एउटा पाटो होला । तर सपथ लिइसकेपछि संविधान र कानूनले जे भन्छ त्यही अनुरुप गर्नुप¥यो नि । जब संविधान अनुरुप नचलेर गुन तिर्नतर्फ लागिन्छ, समस्या त आउँछ ।
० सूर्यनाथ उपाध्याय जस्ता मान्छे अब छैनन् होला ?
–हामी कहाँ सूर्यनाथजस्ता मान्छे छैनन् । चाकडी, चाप्लुसी र नातावादमा चुर्लुम्म डुबेका छौं । संविधान र कानूनले भनेअनुसार गर्ने हो भने कुनै समस्या नै हुँदैन । अहिलेको जड नै संविधान र कानूनको अवज्ञा हो । यसबाट माथि उठेर कार्यसम्पादन गर्ने हो भने धेरै अव्यवस्थाहरु आफैं दूर भएर जानेछन् ।